iPerceptions: Olu nke Onye Ahịa Platform | Martech Zone
Voice of Customer (VoC) bụ mkpokọta nghọta n'ime ahịa mkpa, chọrọ, nghọta, na mmasị nweela site kpọmkwem na anọ na-ajụ. Ọ bụ ezie na ọdịnala weebụ nchịkọta na-agwa anyị ihe onye ọbịa na-eme na saịtị gị, nyocha VoC na-aza KWESYR customers ndị ahịa na-eme omume ha na-eme n'ịntanetị.
Ihe ngosi bụ nyocha nyocha na-arụ ọrụ nke na-eji teknụzụ intercept na ọtụtụ ntụpọ aka, gụnyere desktọọpụ, mkpanaka na mbadamba. iPercepts na-enyere ụlọ ọrụ aka ịchepụta, nakọtara, jikọta ma nyochaa data VoC ha.
Ihe ngosi integrates data VoC na weebụ nchịkọta data dika Google Analytics, na-enye gị ohere:
Sochie ọnụego afọ ojuju maka otu ndị ọbịa dị iche iche ma nyochaa peeji nke ọdịda, peeji nke ọpụpụ, isiokwu ọchụchọ, isi mmalite okporo ụzọ na mkpọsa.
Tụọ ntụgharị mgbanwe megide ogo ngwụcha ọrụ iji nweta nghọta ka mma banyere ntụgharị ntụgharị Tụlee ogo afọ ojuju site na oge na saịtị, ibe eleta, ngalaba eleta na mpaghara obodo.
Nyochaa oge na saịtị site na mmecha ọrụ iji mara ọdịiche dị n'etiti ndị ọbịa na-agbasi mbọ ike ịchọta ozi na ndị na-etinye aka na saịtị ahụ.
Ihe ngosi na-akwado 32 asụsụ na customizable gị ika.
Tags: nzaghachi ndị ahịanyocha ndị ahịanzaghachiihe omimikaadị ngosiechicheoluolu onye ahịa